ARRIMAHA BULSHADDA: Maxaa keenay ineey muruggooto Maryan-Ruun? | Somaliska
Maryan waa gabar ku dhalatay dalkaan Iswiidhan iyo magaaladatan ee Göteborg. Sida ay u tahay qof degan oo debci wanaagsan heeysatana dhaqanka, diinta iyo anshaxa wanagasan ee soomaalida waxaad isweydiineysa su,aalo ah gabadhani ma waxaa ay timid sanad ka hor. Balse aqalka ay ku soo bar baartay iyo waalidka abaabiyey ayey u tahay tusaale wanaagsan oo lugu daydo.
Maryan waxaa ay dhigataa sanadkii koowaad ee jaamacadda Borås ee duleedka magaaladda Göteborg halkaas oo ay ka barto kalkaalisonimadda. Hamigeeda waxbarasho iyo caafimaadka barato waxaa uu ku jiray tan iyo yaraanteediii oo ay jecleyd in ay noqoto mid dadka u baahan gar gaarka siiso ama ay gacan qabato. Xilligii ay dugsiga dhexe dhiganeeysay waxaa ay dabcigeeda iyo naxariisteedaba aad u soo jiidatay cid kasta oo iskuulka joogta.
Haatanse xaalkeedii iyo hamigii waxbarasho ee bilowga ahi waxaa ku yimid jahawareer la xirriira malaha guur eeysan maanka ku heeyn oo ay bartanka kaga soo dhacday. Waalidkii dhalay oo ku faraxsanaa hab-dhaqankeedii wanaagsanaa ayaa haatan walaac ka muujiyey xaaladda la soo deristay.
Sanadkii labaad ee dugsiga sare kolkii ay dhiganeeysay ayey baraha bulshadda ka bartay wiil jooga koonfur Afrika. Xirriirkan wuxuu geliyey xiiso gooni ah malaha la oran karro iyadu uun buu ka saa’id caleeyey jaceylka curdunka ah. Inta badan culimadda ku xeel dheer cilmiga bulshadda waxeey sheegaan xirriirta ka dhasha baraha bulshadda yahay mid kooban oo lagala kulmi karo dhib iyo dheef intaba.
Tiiyoo ay jirta ayaan haddana la oran karin Maryan-Ruun waa gabar ka indho xirran warbixinada laga qoro xirriiradda baraha bulshadda iyo internet-kaba. Balse waxaa ay ku dhiirtay ka gun gaarida xirriir ka bilowday weji buug ama facebook oo xoowli ku socda.
Iyadoo deg degsan ayey soo gashay dukaanka Pressbyrå-ga ku yaala Seentaal Isteeyshinka (Central Station-ka) Göteborg, saacadu waa 8.00 arroornimo waxaa ay subaxan Maryan ku ordeeysay xiisaddii Fiisigis-ka oo ay imtixaan horudhac ah leedahay. Waxeey gacanta ku sidataa koob tarmuus ah oo ay daqiiqo ka hor kafee ka buuxisay.
Daqiiqado ka dibna waxaa salka la heshay kursiga tareenkii lambar 2-da ee qaadayey iskuulkeedii NTI. Inta moobaaylkeedii la soo baxday ayey dhagaha ku owday heestii fannaanka reer Mareykan ee R-Kelly ee caanka aheyd ee” I believe I can fly”.
Subaxaasi imtaxaankii horudhaca ahaa ayaa guul ugu soo dhamaatay oo macalinku u sheegay ineey dhibco fiican keentay, weey is hubtay maadama ay aheyd qof ku fiican xisaabta iyo seeyniska ee. Waxeey fursadii ugu horeeyey ee ay heshay faayber-ka ka wacday jaceylkeedii cusbaa e Jamaal oo ay ugu warantay imtixaankii iyo sidduu ku soo dhamaaday. Waxeey in door ah ka wada hadlayeen sida uu qofba qofka kale u xiiseeynayo iyo sida uu jecelyahay in nolosha la wadaago.
Jamaal da’ahaan kolkaad muuqiisa eeggto waxaa mid ka weyn in badan Maryan-Ruun oo sanadkii 18aad madaxa la gashay. Haddana waa wiil muuqiisha ku soo jiidanayo qaab dhismeedka jirkiisa iyo muuqaalkiisa oo ah kan gabdhaha qaar indho sarcaad ku rida. Su’aashuse sidee Maryan ku baratay Jamaal? Ma aqoon xagga ehelka ah ayaa ka dhaxeeysa mise isbarashadooda ayaa cid ka qeyb qaadatay?
La soco qeybta labaad ee sheekadan.
W/Q: Ikraam Cali-kaar
Fiiro Gaar ah: Sheekadan ayaa haddii Eebbe idmo waxaad toddobaad walba labbo jeer kala socon kartaan shabakadda Somaliska.com, wixii tallo iyo tusaale ah oo sheekadan ku saabsan waxaad kala xirriiri kartaan qoraha sheekadan Ikraam Cali-kaar. Lama faafin karro iyadoon ogolaansho laga heeysan qoraha ku saxiixan. Sheekadan waxeey u gaar tahay shabakadda Somaliska.com
Dabeecada Soomaalida iyo gaadiidka dadweynaha
7 calaamadood oo lagu garto lamaanaha is-jecel ee farxada ku nool
Aduunka waxa ugu fican isdhexgalka runtaa